Inkscape 1.0 inosvika mushure memakore gumi nemashanu ekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Luis Lopez | | Graphics, Zvirongwa
Mushure mekuva muchikamu chekusimudzira kweanosvika makore gumi nemashanu, yakavhurwa sosi giraidhi software Inkscape yakazosvika yekutanga vhezheni yayo yekupedzisira, ine zvakawanda zvakagadziriswa uye nhau.
Inkscape ndeye SVG grafiti gadziriso inoenderana neLinux, Mac uye Windows, uye inogona kushandiswa kugadzira vector mifananidzo senge marogo, madhayagiramu, mifananidzo uye zvese zviri pakati.
Inkscape 1.0 ndiko kuburitswa kukuru, kwekutanga kuve kunze kweiyo "mukuvandudza" vhezheni uye vese vateveri vanga vakamirira chiitiko ichi kwenguva yakareba, uye ikozvino zvayasvika inounza nezvakawanda zvinotarisirwa maficha uye zvigadziriso.
Zvimwe zvezvinhu zvinonakidza zvitsva muInkscape 1.0 zvinosanganisira iyo UI inogadziridza kutsigira zvirinani 4K / HiDPI kuratidza uye kutsigira madingindira, kugona kutenderera nekuratidzira canvas, sarudzo nyowani yekutumira kunze muPNG fomati, mafonti akasiyana siyana, uye nekukurumidza kutsvaga uye kusarudza mashandiro.
«Iyo yekushandisa interface yakachinja kushandisa yazvino vhezheni yeGTK +. Iyi vhezheni nyowani inounza akawanda maficha maficha, kunyanya kune HiDPI skrini. Kugadziridza Inkscape yekushandisa kwako kwave kuri kuedza kukuru kwave kutarisirwa kwenguva yakareba uye yaive hurukuro hombe kuBoston Hackfest, »Vagadziri vanotaura.
Chekutanga alpha vhezheni yeInkscape 1.0 inowanikwa ikozvino
MuInkscape 1.0 tinogona kuwana kugona kudzora saizi yeiyo PowerStroke chishandiso zvine hunyoro hwekubata bata kwekubata skrini.
Iyo alpha, pre-kuburitsa vhezheni yeInkscape 1.0 inowanikwa ye kurodha pasi kuburikidza neAppImage yeLinux-based zvishandiso. A source code package inogona kutorwa pasi kuti inyorwe paMac kana Windows. Zvimwe zvakawanda nezve kuburitswa kweInkscape 1.0 zvichaburitswa munguva pfupi iri kutevera, asi unogona kutarisa manotsi ekutanga pa Iyi link.
Zvichakadaro, kana iwe ukashandisa Inkscape, unogona kurodha vhezheni 0.92.4 yakaburitswa nhasi seyekuvandudza dhizaini iyo inowedzera rutsigiro rwekugadzirisa zvinhu zvakawanda seboka kana chinhu chimwe, kudhinda kugadzirisa, nezvimwe zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Inkscape 1.0 inosvika mushure memakore gumi nemashanu ekuvandudza
Ini <3 Inkscape
Iyo yakagadzikana vhezheni yeWine 4.0 inosvika nerutsigiro rweDirect3D 12 uye Vulkan
KDE Plasma 5.15 ichasvika muna Kukadzi 12 uye idzi ndidzo nhau dzayo